स्पष्टीकरण नबुझाउने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भिम रावल निष्काशन वा निलम्बन ? यस्तो छ ओलीको तयारी - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
स्पष्टीकरण नबुझाउने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भिम रावल निष्काशन वा निलम्बन ? यस्तो छ ओलीको तयारी
अहिले बालुवाटारमा नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको छ। पार्टीबिरुद्द लागेका नेताहरुको बिषयमा बैठकमा छलफल जारी छ। पार्टीबिरुद्द विपक्षी दलहरुसँग मोर्चाबन्दी गरेका माधव कुमार नेपाल– झलनाथ खनाल समुहसँग पार्टीले स्पष्टिकरण सोधेको थियो। सोमबार बिहानै बुझाउनुपर्ने स्पष्टिकरण नबुझाइए पछी एमालेले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने बताइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुको कारण माग्दै नेता नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष भीम रावलसहित ११ जनालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको थियो। कसैले पनि स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका छन्।
नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोजनका निम्ति नेता नेपाल सहित २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। श्रोतका अनुसार स्पष्टीकरण नदिने नेताहरुमध्ये माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भिम रावललाई निलम्बन गर्ने तयारी भएको छ। ‘अहिले नै पार्टीबाट निष्काशन गर्ने कुरा छैन, निलम्बन गर्ने बिषयमा छलफल भइरहेको छ,’ एक नेताले भने।